Football Khabar » १७औं स्थानको फुलहामसँग हारबाट मुस्किलले बच्यो लिभरपुल : टोटनह्यामलाई फाइदा !
१७औं स्थानको फुलहामसँग हारबाट मुस्किलले बच्यो लिभरपुल : टोटनह्यामलाई फाइदा !
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल लिगको १७औं स्थानको फुलहामसँग हारबाट मुस्किलले बचेको छ । आइतबार राति भएको लिगको १२औं साताको खेलमा लिभरपुल फुलहामको घरेलु मैदानमा हारनजिक पुगेर पेनाल्टी गोलको मदतमा १–१ को बराबरी गर्न सफल भयो । १७औं स्थानको टिमसँग हारबाट बच्न लिभरपुललाई ७९औं मिनेटमा पेनाल्टी गोलको सहारा लिनु परेको थियो ।
आफ्नो घरमा फुलहामका लागि खेलको २५औं मिनेटमा बबी रेइडले सुन्दर गोल गरेर टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । फुलहाम सोही १ गोलको अग्रता बचाएर ७८औं मिनेटसम्म सुरक्षितसाथ पुगेको थियो । तर, खेलको ७९औं मिनेटमा लिभरपुलले पेनाल्टी पायो । बक्समा घरेलु टोलीका खेलाडीले ह्यान्ड बल गरेपछि रेफ्रीले लिभरपुलाई पेनाल्टी दिए ।
जसमा मोहमद सालाहले कुनै गल्ती नगरी गोल गरेर खेल १–१ बनाए । बाँकी समयमा दुवै टोलीबाट थप गोल नभएपछि खेल १–१ को बराबरीमा सकियो । अब यो बराबरीपछि लिभरपुलले अंक तालिकाको शीर्ष स्थनमा उक्लिने मौका गुमाएको छ । उसले १२ खेलबाट २५ अंक बनाएको छ । शीर्ष स्थानमा समान खेलपछि समान २५ नै अंक भएको टोटनह्याम छ ।
टोटनह्यामले पनि आजै आफ्नो खेलमा क्रिस्टल प्यालेससँग बराबरी खेलेको थियो । त्यसपछि लिभरपुलले आफ्नो खेल जितेर शीर्ष स्थानमा २ अंकको अग्रता बनाउने मौका थियो । तर, ऊ पनि १७औं स्थानको टिमसँग रोकिएपछि टोटनह्याम गोलअन्तरमा आधारमा अझै शीर्ष स्थान कायमै रहेको हो । यता, लिभरपुललाई बराबरीमा रोकेको फलहामले १२ खेलबाट ८ अंक बनाएको छ । ऊ अझै पनि १७औं स्थानमै छ ।
प्रकाशित मिति २९ मंसिर २०७७, सोमबार ०१:१४